Sidee ku noqon kartaa Farmaajo oo kale | KEYDMEDIA ONLINE
Maqaallo Xasan Mudane
1. Iska dhig waddani cirka ka soo dhacay! Ka sheekey xilligii berisamaadka. Markasta oo aad shacabka la hadlayso adeegso halhayska "Soomaaliya ha noolaato." Inta aad kari karto iska dhig keligiis waddani.
2. In aad farmaajo noqoto macnaheedu waa in aad iska dhaadhicisaa in aad leedahay shacbiyad dadweyne. Sidaas darteed, sameyso dhallinyaro badan oo kaala shaqeysa sidii aad ku yeelan karto taageero shacab. Ha u daymo la'aan carruurta iyo hooyooyinka. Markaad adduunka la hadlayso u sheeg in dowladdaada ay tahay dowlad shacab (populist state).
3. Iska indhatir xaqiiq kasta oo ka jirta dalka, taas oo liddi ku ah rabitaankaaga. Iyada oo sagaashanka la maraayo oo firimbiga afka lagu haayo waxaad iska dhahdaa doorasho qof iyo cod ah ayaan qaban karaa. Maskaxda ku haay halhayskaagii "Soomaaliya ha noolaato."
5. Sharciga jebi, wax ka beddel haddii aad rabto. Ha u dulqaadan hay'ad kasta oo caqabad ku ah rabitaankaaga! Wax kasta xafiiskaaga ha ka bilowdaan, hana ku dhammaadaan. Yaa u baahan Baarlamaan iyo Garsoor madaxbannaan? Wax kasta adigaa qaban kara. Ha hilmaamin in aad tahay madaxweyne shacab.